I-ameethst ye-Goethite, ekwabizwa ngokungalunganga ebizwa ngokuba yi-cacoxenite amethyst - ividiyo
Thenga i-amethyst yendalo kwivenkile yethu
I-ameethst ye-Goethite, ekwabizwa ngokuba yimpazamo ye-cacoxenite amethyst
Umntu othile ukhe wathi i-catholicenite njenge cacoxenite ngenxa yokufana ngokucacileyo kuleyo mineral, kodwa i-amethyst ene-cacoxenitemay ayikho kwaphela.
I-Goethite inclusions zenza imixokelelwane etyheli eqhele kakhulu etyheli kuye ngenaliti emdaka ekhangeleka ngathi incinci.
Ezi zixhobo ziqhelekile kwi-amethyst evela kwi-Ametista do Sul, eyayibizwa ngokuba yi-Sao Gabriel, iRio Grande do Sul, eBrazil.
I-Goethite amethyst quartz
I-Amethyst luhlobo lwe-quartz emfusa kwaye idala umbala wayo o-violet kumngxunya, ukungcola kwesinyithi kwaye kwezinye iimeko ezinye izinto zentsimbi, kunye nobukho bezinye izinto ezilandelwayo, ezikhokelela ekungeneni kwe-crystal lattice. Ubulukhuni bezimbiwa ziyafana ne-quartz, ngaloo ndlela zisenza ukuba zilungele ukusetyenziswa kubucwebe.
I-Amethyst yenzeka kwii-hues eziphambili ukusuka kwi-pinkish ye-pinki ebomvu kwaye ibe yimfusa. I-Amethyst inokubonakalisa enye okanye zombini ii-hues zesekondari, zibomvu kunye nohlaza okwesibhakabhaka.
Yobunzulu Womendo kakhulu, umbala neametiste kudla kubekiwe ngemivumbo enxuseneyo ubuso lokugqibela yikristale. Omnye umba kwi ubugcisa lapidary nokusikwa ngokuchanekileyo ilitye ukufaka umbala ngendlela eyenza ithowuni ye gem ogqityiweyo bomzi. Ngokufuthi, into yokuba ngamanye amaxesha kuphela maleko ubhityileyo ngemisonto umbala kusegazini ilitye okanye umbala andivoti afanayo ukulungiselela neemela enzima.
U-Goethite amethyst ovela eBrazil
tags neametiste, akhazimlayo, Quartz